Tobanka Waxyaabood Ee Ay Dadku Ugu Qoomamada Badan Yihiin - Daryeel Magazine
Tobanka Waxyaabood Ee Ay Dadku Ugu Qoomamada Badan Yihiin
1. Maan ku guulaysan inaan ka midho-dhaliyo riyadaydii iyo hankaygii. Dad badan baa ku calaacala in ay ku dhici waayeen inay rumeeyaan riyooyinkoodii, taas beddelkeedana
noolaa iyagoo dadka kale raallo galinaya. Iyagu go’aan kamay gaadhi jirin noloshooda, kolba xaaladda ay ku jiraan ayaa go’aamin jirtay marxaladdooda nololeed.
2. In badan baan ku mashquulay shaqo, oo wakhti lama aan qaadan qoyskayga. Waxay dadkani siiyeen wakhti badan shaqooyinkooda, waxa aanay ka mashquuleen dadkii ay jeclaayeen – sidaas bay ku calaacaleen.
3. Wakhti fiican lamaan soo qaadan saaxiibbaday. Marka caafimaadka iyo dhallinyarannimaduba meesha ka baxdo, dadku waxa ay qiimeeyaan waxyaabo aanay hore u dareemi jirin. Dad badan baa ku cataabay in aanay saaxiibbadood wakhti fiican lasoo qaadan.
5. ‘Waxay ahayd inaan runta ku hadlo oo maskaxdayda si fiican u adeegsado’ – Dadka sidan ku calaacalayaa badankoodu waxa ay isku dayi jireen inay dagaalka/is-qab-qabsiga iska ilaaliyaa. Doodaha iyo xidhiidhada dadka ka dhexeeyaba runta kamaysan sheegi jirin.
6. Dad badan ayaa ka qoomamooday in wakhtigii ay noolaayeen aanay ahayn kuwa gacanta sare leh ee goaanka gaadha. Tusaale ahaan, haddii xidhiidh aad qof la lahayd, qofkaasina uu ahaa qof qiimo ku leh agtaada, kadibna isku dhac yimi, labada qof midbaa mas’uuliyad isa saara oo raalli galin, turxaan bixin ama tanaasul sameeya – dad badan baa ku cataabay inaanay qofkaas noqon.
7. Waxaan farxi lahaa haddii aan carruur soo dhali lahaa. Dad badan baa ku calaacalay in aanay ubad ka tagayn. Waxa ay dadkani sheegeen inay isku illaabeen da’dii dhallinyarannimada.
8. Maanu kaydsan Maaliyad fiican oo aanu isticmaalno markaanu shaqo-gabnay. Waxa ay sheegeen in aanay lacag buuran sii dhigan si ay u isticmaalaan markii ay gaboobeen. Lacagtooda ayay aad u isticmaaleen wakhtigii ay dhallinyarada ahaayeen.
9. Dad kale ayaa waxa ay ku cataabeen in aanay u noolaan si ‘Run’ ah. Dadkan ayaa qiray in wakhtigii ay noolaayeen aanay noloshoodu ahayn mid naftooda si toos ah uga tarjumaysay. Waxa ay sheegeen in ay iska dhigi jireen cid aan nafahooda ahayn. Naftooda umay sheegi jirin dadka kalena dabcan run kulama ay dhaqmi jirin.
10. Farxaddu waa shay la doorto – la abuurto. Waxyaabaha ay ku calaacaleen dadkani ayay ka mid ahayd in ay farxadda ku sugeen cid aan iyaga ahayn iyo meel aan noloshooda ahayn.
Tobanka Laptop Ee Ugu Batariga Fiican 2016 Madoonaysaa dadku in ay ku Qadariyaan kuna Jeclaadaan? Joojinta ka fikirka iyo Danaynta waxay Dadku Kuu Maleeyaan 7 Qodob Oo Ay Ku kala Duwan Yihiin Dadka Nolosha Guul Ka Gaara Iyo Kuwa Guuldareysta